"Waa Pele-ha Man United" - Qoyska Iska Leh Red Devils Oo Tababare Solskjaer Kaga Soo Horjeedsaday Iibka Ciyaartoy Ay U Arkaan Inuu Sida Halyeey Pele Yahay - Gool24.Net
“Waa Pele-ha Man United” – Qoyska Iska Leh Red Devils Oo Tababare Solskjaer Kaga Soo Horjeedsaday Iibka Ciyaartoy Ay U Arkaan Inuu Sida Halyeey Pele Yahay
Qoyska iska leh mulkiyada kooxda Manchester United ee Glazer Family ayaa lagu sheegay kuwo qorshaha iyo mustaqbalka ciyaaryoy kooxdooda kamid ah ku dul maamuli doona tababaraha kooxda ee Ole Gunnar Solskjaer.
Ciyaartoygaas ayaa ah Anthony Martial oo ay qoysku u arkaan inuu kooxdooda ka yahay sidii uu ahaa halyeeyga ree Brazil ee Pele taas oo mustaqbalkiisa mid xasiloon ka dhigaysa.
Tababaraha haatan ee Man United Solskjaer iyo midkii uu shaqada ka bedelay ee Jose Mourinho ayaa labaduba su’aal ka keenay diirad saarista iyo ka go’naanshaha Martial.
Labada tababare ee kala duwan ayaan si buuxda ugu qancin hab fikrika iyo aragtiyaha Martial ee marka uu tababaraka joogo iyo marka uu kulan ku jiroba taas oo keentay soo jeedinta ah in kooxda gabi ahaanba laga diro.
Warar la helay ayaa sheegaya shaqsiga masuulka uga ah qoyskaas Manchester United inta ugu badana la socda xaalada kooxdu uu yahay mid Martial ka dhigtay ciyaartoyga uu inta ugu badan ka xiiseeyo dhammaan xiddigaha kooxda.
Martial ayaa bishii January ee sanadkan saxeexay heshiis ku eeg ilaa 2023 kaas oo uu toddobaadkii ku qaadanayo £200,000 balse tan iyo wakhtigaas ayuu kaliya 2 gool soo dhaliyay 13 kulan oo uu soo muuqday.
Xilli suuqii hore ayay ahayd markii uu Mourinho oo 23 jirkan ka aamin baxay isku dayay inuu kooxda ka fasaxo balse guddoomiye ku xigeenka Manchester ee Ed Woodward iyo Joel Glazer ayaa kasoo hor jeestay go’aankaas.
Sidoo kale rabitaanka Woodward iyo Joel Glazer ayaa meesha ka saaray rabitaankii Mourinho ee ahaa saxeexa Ivan Perisic oo Inter Milan ka tirsan maadaama oo ay si weyn u aaminsanaayeen Anthony.